[သင်ခန်းစာ ၁၆] ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ member များကိုအသုံးပြုခွင့်၊ ပြောင်းလဲခွင့်မရနိုင်ပါ။ - Acroquest Myanmar Technology
[သင်ခန်းစာ ၁၆] ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ member များကိုအသုံးပြုခွင့်၊ ပြောင်းလဲခွင့်မရနိုင်ပါ။
အခု အရေးကြီးတဲ့ “access limit toamember” အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ member ဆိုတာက class ထဲမှာရှိတဲ့ field(attribute) တို့၊ method တို့ကို ခြုံပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ၉ နဲ့ ၁၀ ကို နားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။
member တွေကို field (attribute) တို့ method အနေနဲ့ ခေါ်ပါတယ်။
အခု “field (attribute)” တွေအကြောင်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။
စကားလုံးတွေကို မြင်ရရင် နည်းနည်းခက်တဲ့ပုံပေါ်တယ်။ ဥပမာ “class“, “member“, “access restriction“, “field“, … စတာတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက program တစ်ပုဒ်ကိုရေးဖို့အတွက် နားလည်ဖို့လိုတဲ့ words တွေမို့ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Field တွေကို အသုံးပြုရာမှာ အသုံးပြုပုံအရ အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။
ပထမအနေနဲ့ သင်ခန်းစာ၁၀က ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီး input and execute လုပ်ကြည့်ရအောင်။
name = newName; // (E)
ပရိုဂရမ်ကို compilation and execution အဖြေကတော့ အောက်ကအတိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု တန်ဖိုးတွေ assign ထည့်တာကို ကြည့်ရအောင်။
အဲဒီ AnotherClassSample class ရဲ့(E)မှာတန်ဖိုးထည့်တာကိုကြည့်ရအောင်။
private String အနေနဲ့ကြေညာထားတဲ့ name ဆိုတဲ့ variable ထဲကို တန်ဖိုးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်တယ်။
အဓိပ္ပာယ်ကတော့ name ဆိုတာက AnotherClassSample ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် field တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အခု method ထဲမှာ variables ကြေညာတာကိုလေ့လာရအောင်။ Field ဆိုတာလည်း variables အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခြားနားချက်ကတော့ method ထဲမှာကြေညာထားတဲ့ Variables ကို method ထဲမှာပဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ variable ကို class ရဲ့ field အနေနဲ့ ကြေညာတယ်ဆိုရင် သူ့ကို သတ်မှတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ class ရဲ့အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
“private” ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ?
“private” ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ သူ့ကိုကြေညာထားတဲ့ class အတွင်းကပဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်။
အဲဒါကြောင့် အခြား class တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ClassSample က AnotherClassSample ရဲ့ fieldတွေကို တိုက်ရိုက် အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် AnotherClassSample class ရဲ့ setName method ကိုသုံးပြီး တန်ဖိုးကို ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ AnotherClassSample class ရဲ့ field တွေကို တန်ဖိုးတွေတိုက်ရိုက်ထည့်ကြည့်ရအောင်။
ClassSample classSample; // （５）
classSample = new ClassSample(); // （６）
classSample.setMessage(“Hello Java World!”); // （７）
classSample.printMessage(); // （８）
AnotherClassSample anotherClass = new AnotherClassSample(); // （９）
anotherClass.printName(); // （１０）
anotherClass.setName(“bar”); // （１１）
anotherClass.name = “change”; // （１３）
anotherClass.printName(); // （１２）
အခု ClassSample class ရဲ့ main method ထဲမှာ name ထဲကို (၁၃)က အတိုင်းတန်ဖိုးထည့် လိုက်တဲ့ပြီး compile လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း error ပြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ပြီးတော့ အခု “name” ကို AnotherClassSample မှာ public အနေနဲ့ကြေညာကြည့်ရအောင်။
// private String name; // （Ａ）
public String name; // （Ａ’）
public AnotherClassSample() // （Ｂ）
System.out.println(“AnotherClassSample Constructor!!”); // （Ｃ）
name = “foo”; // （Ｄ）
name = newName; // （Ｅ）
System.out.println(“My name is ” + name + “.”); // （Ｆ）
ပြီးတော့ compile လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အဖြေကို တစ်ခါပဲ ပြပါလိမ့်မယ်။
အခုလုပ်ခဲ့တာတွေကို ကြည့်ပြီး နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ Variableတွေကို public အနေနဲ့ ကြေညာခဲ့ရင် သူ့ကိုကြေညာထားတဲ့class ရဲ့အပြင်ကနေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘယ်လို အသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကို လေ့လာရအောင်။ လူအများစုက အားလုံးကို public အနေနဲ့ကြေညာတာ ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ class ထဲမှာကြေညာထားတဲ့ fields တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး responsibility ကအရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ အောက်က program ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။
// Man class
private String name; // Registered name
// Constructor(Assigned name)
public Man(String assignedName)
// Register assignedName as name
name = assignedName;
// Method to get name
return name; // Return registered name
“Man class” ထဲမှာ “name“ကိုကြေညာထားပါတယ်။ (သူ့ရဲ့“Constructor” ကိုလဲ ” Man class” ထဲမှာ ကြေညာထားပါတယ်)။
“Man class” ထဲမှာ getName method ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် “name“ကို confirm လုပ်နိုင်ပါတယ်။
“name“ကို “private” အနေနဲ့ကြေညာခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ကိုတစ်ခြား class တွေကနေ ပြင်လို့၊ ပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ကိုပြင်ဖို့၊ ပြောင်းလဲဖို့ method လဲမရှိပါဘူး။ (အဲဒါကြောင့် “name” ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။)
တစ်ကယ်လို့ အခြား classes တွေကနေ ပြောင်းလဲခွင့်မပြုချင်ဘူးဆို “private” အနေနဲ့ ကြေညာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ။ “private” အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မလား။
တစ်ကယ်လို့ Variable တန်ဖိုးကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တစ်ခြားclass ထဲမှာ ပြောင်းလဲခွင့်မပြုချင်ဘူးဆို “private” ကိုသုံးဖို့ သတိရစေချင်ပါတယ်။
“private” and “public” တွေအပြင် “Protected” လဲရှိသေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ နောက်ပိုင်း ကျမှ ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. fieldတစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ variableတွေကို classထဲမှာ referလုပ်လို့ရပါတယ်။
2. Field တွေက သူ့ကိုကြေညာတဲ့ပုံစံအရ ကန့်သတ်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
3. Classထဲမှာကြေညာထားတဲ့ field တွေအတွက် class မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။
[Lecture 17] Permission မရှိဘဲ အသုံးပြုချင်ပါလား။ method တစ်ခုကို accessလုပ်ဖို့ limit ထားကြည့်ရအောင်။